Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in la dayactiri doono dhamaan waddooyinka Muqdisho | Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in la dayactiri doono dhamaan waddooyinka Muqdisho
Published on January 27, 2013 by Mowliid · No Comments · 2,172 views
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhawaan la hagaajindoono dhamaan wadooyinka magaalda Muqdisho si culayska looga yareeyo wadada maka almukarama ee magaalda muqdisho oo ciriiri dartiis ay aad ugu soo bateen shililka gawaarida.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu qorsheynayo sidii loo dayactiri lahaa wadada loo yaqaano Wandaha si loo yareeyyo ciriiriga ka jira wadada Maka Almukarama.
Mudane Maxamed Yuusuf Afhayeenka ayaa xusay in sidoo kale maamulka gobolka Banaadir uu qorsheynayo dayactirka wadada Sodocka iyo dhamaan wadooyinka magaalada Muqdisho si loo soo celiyo bilicdii magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale taliyaha ciidanka nabad galyada wadooyinka Gen. Cali Xirsi Barre ‘’Cali Gaab’’ ayaa qayla dhaan ka muujiyay shilalka ku soo badanaya magaalada Muqdishio, kuwaas oo saamayn adag ku yeeshay isu socodka wadada Maka Al mukarama ee maagalada Muqdisho.
Taliye Cali Gaab ayaa intaa ku daray in ciidamada nabadgelyada wadooyinka ay habeen iyo maalinba u taaganyihiin gudashada waajibaadkooda, isagoo xusay in shilalka kusoo badanaya wadada Maka Almukarama ay sabab u tahay gaadiidka oo ku soo batay magaalada, wadayaasha oon intooda badan lahayn qibrad wanaagsan, burburka wadada iyo sababo kale oo farabadan.